भविष्यमा जीवित बन्ने आशामा यसरी १४६ जनाको लाश राखियो
संवाददाता/ आइतबार, जेठ ३०, २०७८
साइन्स फिक्सन फिल्ममा क्रायो*जेनिक च्या*म्बरको विषय समा**म्बरमा फिल्मका पात्र*हरुले आफ्नो शरीर*लाई लामो सम*यसम्म फ्रिज गर्ने* र वर्षौंपछि त्यस्ता च्याम्बरबाट निस्किँदा ज्यूँका त्यूँ रहने दृश्यहरु फिल्ममा हेर्न पाइन्छ ।
क्याप्टेन अमेरिका नामक फिल्ममा त ७० वर्षसम्म बरफमा जमाएर राखे*पछि पनि मानि*सलाई पुनः जीवित गराउन सकिने कथा स*मावेश छ ।
हालै करे*न्ट बायोलोजी ना*मक विज्ञान पत्रि*कामा एउ*टा शोध प्रकाशित भयो । जसमा रुसको साइबेरियामा २४ हजार वर्षसम्म हिउँमा जमेर रहेको डेलाइट रोटिफर नामक सूक्ष्म जीव जीवितै रहेको तथ्य पत्ता लागेको छ । यो सबैलाई आश्चर्यजनक शोधको रुपमा रहेको छ ।
यी सबै तथ्यह*रुलाई हेर्दा एउटा प्रश्न स्वभा** के मानिसला*ई समेत लामो समयसम्म क्रायोजेनिक निद्रामा राखेर पुनः जीवित गराउन सकिन्छ ? के भविष्यमा कुनै त्यस्तो प्रविधिको विकास होला जसले मरेका मानिसलाई पनि पुनः जीवित गराउन सक्नेछ ? यही विश्वा*सका साथ अमेरिकाको एरिजोनास्थित अ**टेन्सन फाउन्डेसनले १४६ जना मानिसको शवलाई सुरक्षित ढंगले क्रायोजेनिक च्याम्बरमा राखेको छ । भविष्यमा विज्ञा*नको मद्दत*ले ती मानिसहरुलाई पुनः जी*वित बनाउन* सकिने वि*श्वास उसको छ ।
एरिजोनाको फोनिक्समा रहेको उक्त *फाउन्डेसनले ती मानिस*हरुको मृ*त शरीर*लाई एक विशेष खालको क्रायोजेनिक च्याम्बरमा राख्छ जसले जी*वित छँदै भवि*ष्यमा पुनः दोस्रोपटक जीवित बन्ने इच्छा जाहे*र गरेका हुन्छ*न् । ती विशेष च्याम्ब*रमा निकै क*म तापक्रममा शवलाई राखिएको हुन्छ ।
कम तापक्रममा राख्नाले मृतकको शरीरमा कुनै पनि परिवर्तत तथा क्षयीकरण हुँदैन र शरीर जस्ताको तस्तै रहन्छ । अल्कार लाइफ एक्सटेन्सन फाउन्डेसनले आफ्नो वेबसा*इटमा यस प्रवि*धिको बारेमा विस्तृत व्याख्या* गरेको छ ।
मृत शरीरलाई यसरी विशेष खालको क्रायो च्याम्बरमा राख्दा झण्डै साढे २ करोड रुपैयाँ बराबरको खर्च लाग्दछ । त्यसैले धनाढ्य परिवारका व्यक्तिहरुले आफ्ना मृत*क परि*वारजनको शव त्य*सरी सुरक्षित राख्न सक्द*छन् ।
हालसम्म यो संस्थाले १४६ जनाको श*व क्रायोजेनिक रुपमा एक विशेष* तरिकाले तरल नाइ*ट्रोजनमा राखेको छ । त्यसमा प्रथम विश्वयु*द्धका एकजना सिपाहीको शव पनि रहेको छ । त्यहाँ राखिएका मृतक*का परिवार*जनलाई यो आशा छ कि भवि*ष्यमा विज्ञा*नको चाम*त्कारिक विकासले गर्दा ती मृतकलाई पुनः जी*वित गराउन स*किनेछ ।